ALinks - mandehandeha sy miaina na aiza na aiza ho an'ny rehetra
ALinks, mandehandeha ary miaina na aiza na aiza ho an'ny rehetra
Fampahalalana maimaim-poana sy torolàlana momba ny dia sy ny fiainana any amin'izay tianao. Mandehana, miala voly, mitsidika na miantsena. Mifindra, mianatra, miasa, mandeha mianatra, na mahazo fitsaboana. Ireo lahatsoratra tsy miankina ireo dia natao ho an'ny rehetra avy amin'ny firenena rehetra. Miresaka amin'ny fiteny maro momba ny firenena maro maneran-tany izahay. Tongasoa ny mpitsoa-ponenana!
Ahoana ny fangatahana visa amerikana avy any Alemaina?
Jona 26, 2022 Demi Travel, visa
Maro amin'ireo teratany alemana no maniry ny hitsidika an'i Etazonia, na ho an'ny fandraharahana izany na hanana izany traikefa mampientam-po izany. Mety misy zavatra maro ao an-tsainao, ary nanome valiny izahay ato amin'ity lahatsoratra ity. Ilaina matetika ny visa tsy mpifindra monina
Ahoana ny fianarana any Gresy?
Jona 3, 2022 Demi Gresy, fianarana
Raha te hianatra any Gresy ianao dia mila ny taratasy fanamarinana sekoly ambaratonga faharoa. Afaka misafidy ny oniversite tianao ianao. Mety ho voafetra ny safidy azonao. Raha tsy olom-pirenena EU ianao dia mety mila visa ho an'ny mpianatra. Mihatra ianao
Ahoana ny fomba hahitana trano fialofana any India?
Jona 2, 2022 Demi fanampiana, India
Mikaroka ao amin'ny Google Maps ianao 'fialofana ho an'ny daholobe ao amin'ny (anaran'ny tanànanao)' na 'fialofana ho an'ny daholobe ao amin'ny (anaran'ny tanànanao)'. Izany dia ny fitadiavana fialofana ara-tsakafo na aiza na aiza manerana an'i India. Amin'ity sarintany ity dia azonao atao ihany koa
Tanàna tsara indrindra any Torkia honenana
Enga anie 25, 2022 Demi mifindra, vorontsiloza
Ny sasany amin'ireo tanàna tsara indrindra any Torkia honenana dia Istanbul, Antalya, Bursa, ary Sanliurfa. Laharana voalohany i Tiorkia amin'ireo vondrom-piarahamonina ara-kolontsaina, misokatra ary manasa azy. Ny tanàna Tiorka dia mora mipetraka ao amin'ny sokajy "Miaina". Zareo dia manana
Ny toerana tsara indrindra hotsidihina any Torkia dia Istanbul, Efesosy, Bodrum ary Kapadokia. Torkia dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hitsidihana. Izy io dia manana ny fototry ny tantara fahiny miaraka amin'ny zavakanto tsara tarehy. Ity ny lisitry ny toerana ambony indrindra
Ahoana no fiasan'ny fitaizana zaza any Aostralia?
Enga anie 19, 2022 Demi fanampiana, Aostralia
Ny fitaizana ny zaza dia zavatra ilain'ny ray aman-dreny malaza sy tena ilaina. Ohatra amin'izany ny Long Day, ny toeram-piasana, ary ny fikarakarana ankizy aorian'ny fianarana. Ny fianakavianao dia afaka misafidy ny hikarakara ny zaza araka izay azo atao. Ahoana no fiasan'ny fitaizana zaza any Aostralia?
Inona no banky tsara indrindra any Korea?
Enga anie 16, 2022 Shubham Sharma Banks, Korea Atsimo
KB Kookmin Bank no lehibe indrindra any Korea Atsimo. Miaraka amin'ny fitambaran'ny fananana manodidina ny 422 trillion, ny Repoblika Koreana no nandresy, tamin'ny taona 2020. Miaraka amin'ny fananana manodidina ny 387 trillion ny fandresen'ny Repoblika Koreana, ny Banky Shinhan no laharana faharoa. Ny vinavinan'ny sehatra ara-bola Koreana
Ahoana ny fianarana any Uganda? Oniversite any Ogandà
Enga anie 14, 2022 Demi fianarana, Oganda
Azonao atao ny mikaroka oniversite any Uganda izay tianao hianarana. Tsy lafo ny saram-pianarana. Manana safidy maro ianao ho an'ny fianarana diplaoma sy diplaoma. Tsy dia lafo loatra ny fampianarana Ogandey. Raha oharina amin'ny faritra hafa amin'ny
Ohatrinona ny vidin'ny dia mankany Kolombia?
Enga anie 14, 2022 Demi Kolombia, Travel
Raha mitady toeran-teti-bola ho an'ny dia ianao dia mifanaraka amin'ny faktiora i Kolombia. I Kolombia dia mety ho iray amin'ireo firenena mora vidy indrindra nalehanay nefa tsy midika izany fa tsy ho tia isan-tsegondra ianao. Misy karazany marobe toy izany,
1 2 3 ... 84 Next Posts»